ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: 2014
" အပြောင်းအလဲ "
တိမ်ညိုတွေ ထမ်းပိုးထားတဲ့ ကောင်းကင်ဟာ
ပြိုမယောင်နဲ့ ညို့ ….
ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ အကြိုအကြား ဂရုစိုက်မှုတွေကနေ
ဘ၀ဆိုတာ စီးဆော စီးနေသလို ….
တိတိပပ တည်မြဲတာဆိုလို့ မမြဲခြင်းတရားတစ်ခုတည်းဆိုတဲ့နောက်
စိတ်တွေဟာ မေတ္တာခြုံလို့ လုံလွန်းလှတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:36 AM2comments Links to this post
" သောကြာတမ်းချင်း (၇) "
ကိုယ်မပျိုးပဲနဲ့ အလေ့ကျပေါက်ခဲ့တာပါ ..
အညွန့်တလူလူနဲ့ ကောင်းကင်ကို မျှော်ကြည့်ခိုက်
ဘယ်တော့မှ မဟောင်းတဲ့ ဂီတသံ
နားထဲ ညက်ညက်ကလေး ၀င်တယ်။
“ရန်ကုန်မှာသာတဲ့ လ” တဲ့လား …
ရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှငြီးမသွားတဲ့ သံစဉ်
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ့်နေ့တွေ သာယာဖူးခဲ့တယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:34 AM0comments Links to this post
" အချစ်ကြောင့် ............. "
ရင်နာတာတွေ၊ မကြင်နာတာတွေ ထည့်မတွက်နဲ့
အတိတ်ဆိုတာ စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ ကခဲ့ကြတဲ့ဇာတ်
ဇာတ်သိမ်းကိုပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်လို အတိအကျတွက်ထုတ်လို့ ရနိုင်သလား?
နှလုံးသားကို မျက်ရည်နဲ့ ထုံမွှမ်းရမယ်ဆိုရင်
ငါကတော့ ပစ္စုန်ပ္ပန်ကိုပဲ မွေ့လျော်တယ်။
နင့်ကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေ လက်ရှိအတိုင်း တည်စေ။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:32 AM0comments Links to this post
" ငါတို့ခေတ် "
တံလျပ်တွေတဖိတ်ဖိတ်လက်နေတာကိုမှ ရိုးကျိုးနေသူတွေက တပုံတပင်။
Demand အရမ်းနည်းသွားတဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့အရာ။
သူလို ကိုယ်လိုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြေးတက်နေသယောင်ယောင်
အတုတွေက အစစ်တွေကို ပြန်လှည့်ဖြားတယ်။
မီလာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲ မမီ မီအောင်လိုက်ရင်း
အတုံးအရုံးနဲ့ ကျဆုံးနေတာက ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ။
ခေတ်ရဲ့သားကောင်ပဲ ဆိုဆို၊ စနစ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးပဲ ပြောပြော
သေချာတာက စိတ်ဓါတ်တွေ အပိုင်းပိုင်း အကျိုးကျိုး
အငတ်တောထဲ မျောလာတဲ့ ထမင်းတစ်စေ့လို
ဒီလိုနဲ့ပဲ မျိုးဆက်တွေ တစ်ဆက်ပြီး တစ်ဆက် ………
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:30 AM0comments Links to this post
" သောကြာတမ်းချင်း (၆) "
အဆင်မပြေတာကို ကံလို့ပဲ ပုံချပါရစေ။
ကဲ … ၀မ်းနည်းစရာ မကောင်းဘူးလားလို့ မှန်ကြည့်ပြီးမေးမိတဲ့အခါ
ငါ့ပုံရိပ်က ငါ့ကို ခပ်ဖွဖွပြုံးပြတယ်။
ပြီးတော့ …….. ပြောတယ်
မှန်ထဲက အရိပ်တောင် ဘယ်နဲ့ညာ မှန်လို့လား တဲ့ ….
အဲ့ဒီတော့မှ ငါက ငါ့ပုံရိပ်ကို ခပ်ဖွဖွ ပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:28 AM0comments Links to this post
" သောကြာတမ်းချင်း (၅) "
တခါတရံ သူ့ရဲ့ လူကြီးဆန်မှုကို ချစ်တယ်။
ကဲ .... ကျမ အချစ်က ဘယ်လောက်များ အပြောင်းအလဲမြန်လိုက်သလဲနော်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:26 AM0comments Links to this post
" သောကြာတမ်းချင်း (၄) "
အလိုလို ထတောက်တတ်တဲ့ ပူပန်မှုကို မအေးငြိမ်းစေဘူး။
ကိုယ်လိပ်ပြာလေး လှပစွာဝဲပျံနေဖို့အတွက် ပူပန်တတ်ဖို့လိုတယ်။
သံယောဇဉ်နဲ့ ပူပန်မှု တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်ဆိုတာ
ငါ့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ ရှိတာတော့ သေချာပါတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:24 AM0comments Links to this post
“ သန့်ရှင်းစိမ်းလန်း တို့အစွမ်း ”
စွမ်းဆောင်ကြသည် သန့်ရှင်းစိမ်းလန်း တို့အစွမ်းတည့်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:22 AM0comments Links to this post
" စိတ် "
စိတ်ကပဲ ချစ်စေ၊ မုန်းစေတယ်။
စိတ် … ရှေ့ကသွားလွန်းတော့
စိတ်ကို စိတ်နဲ့ ပဲ ပြန်မြှားကြည့်ရအောင် ....
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:19 AM0comments Links to this post
" မေ နွယ် နီ ဟန် "
စိတ်အနေလေးက ရူးလောက်အောင် ညွတ်နူးဖွယ်
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:17 AM0comments Links to this post
" ခေတ်ကြီးကိုက "
အားနေရင် အေးအေးနေဖို့ထက် ဓါးသွေးနေချင်တဲ့ ခေတ်။
သူက “ဒါ” ဆိုရင် ငါကတော့ “ဟိုဟာ” ဆိုပြီး ချို တမြမြဖြစ်နေသူတွေ ပေါတဲ့ခေတ်။
ရိုင်း ပြတာကိုမှ သူရဲကောင်းထင် အားနေ လက်ခလယ်ထောင်ပြချင်နေတဲ့ခေတ်။
အရာရာကို မှန်ဘီလူးသုံး အရှိကိုချဲ့ပြီး ကိုယ်ရည်သွေးနေကြတဲ့ ခေတ်။
မသိတာကို သိယောင်ကားလုပ်တာက တစ်မျိုး၊
သိသင့်တာကို မသိလုပ်လိုက်တာက တစ်ဖုံ၊
လူညီရင် “ဤ” ကို “ကျွဲ” လုပ်တတ်ကြသလို၊
“ကျွဲ” ကိုလဲ “ကြွက်” ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ကြသေးတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:14 AM0comments Links to this post
" သောကြာတမ်းချင်း (၃) "
ကိုယ့်မျက်နှာပေါ် အပြုံးတစ်ပွင့်တော့ အမိအရတင်ပေးထားပါရဲ့ …
ဒီအပြုံးတွေ မလေးလံခင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်ကြစို့ကွယ် …
တခါတလေ အချစ်တွေ သိပ်ကြီးလွန်းသွားတဲ့အခါ
မမြင်ရတတ်တော့တာ မေ့နေမစိုးလို့ပါ …..း)
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:12 AM0comments Links to this post
" သောကြာတမ်းချင်း (၂) "
အလွမ်းတွေ ခဏခဏ ပျိုးချနေမိတာ
မျှော်လင့်ချက်တွေက ခုထိ အသွေးအရောင်ကို မစုံနိုင်သေးဘူး။
ပြက္ခဒိန်တွေသာ တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက်ပြောင်းသွားတယ်
အနာဂတ်တွေက ခုထိ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မလာသေးဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပဲ လွမ်းတိုင်း လွမ်းတိုင်း
အတိတ်တွေကို စိတ်ကူးပြစက်နဲ့ ပြန်ပြန်ရစ်ကြည့်မိလား ရစ်ကြည့်မိခဲ့ ….
“I miss you” ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးတစ်စောင်ချထားလား ချထားမိရဲ့ ….
သူညည်းဖူးတဲ့ သီချင်းအချို့ နားထောင်လား နားထောင်မိရဲ့ ….
တစ တစနဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့ ယဉ်ပါးမှန်းမသိ ယဉ်ပါးခဲ့ ………
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:09 AM0comments Links to this post
" အစိုး မရစေချင် "
လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်တဲ့ ခေတ်ထဲ
လူတွေကိုကာကွယ်ဖို့လား မင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့လား?
အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ စကားအစုံစုံနဲ့
ငါတို့တွေကို ပတ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ဘယ်နှစ်ဆယ်??
မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့ အဓိကလို့ ပြောမိရင်
ခနဲ့တဲ့တဲ့ ဂွတိုက်ပြောမယ့်သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး။
တချို့ တချို့တွေက ခွေးတွေလို
မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေပဲဆိုတာ မေ့ကြတယ်။
အခြေခံလောက်မှနားမလည်ပဲ လူကြားကောင်းတာမှန်သမျှ အကုန်လုပ်
အဲ့သလိုများစွပ်စွဲမိရင် ငါ့ကို ဘာပုဒ်မနဲ့များ အရေးယူဦးမလဲ?
ဧပြီ (၁၀) ရက်၊ ၂၀၁၄
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:08 AM0comments Links to this post
" ပြောရင်း၊ ဆိုရင်း လွမ်းတယ် ….”
ကိုယ်ကသူ့အကြောင်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြောပြတဲ့အခါ …
သူက ကိုယ့်မျက်လုံးထဲ ပုံရိပ်ယောင်အဖြစ်အလိုလိုဝင်လာတယ်
ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းလေးကတော့ အလိုလို ကွေးညွတ်သွားခဲ့ …..
သူက ကိုယ့်ကို “ကလေးရေ” လို့ တိုးဖွဖွ ခေါ်သတဲ့လို့ပြောပြမိတဲ့အခါ
ကိုယ်ကလဲ ခုံခုံမင်မင်နဲ့ ခပ်ဖွဖွ လိုက်ရွတ်ဆိုမိခဲ့ ….
သူက ကိုယ့်ခေါင်းကို ခပ်ဆဆ ပုတ်လို့ ခပ်မာန်မာန် ကြည့်တော့
ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ပဲ မကျေမနပ်ဖြစ်ပြခဲ့ ….
“ပူတူးရေ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကွဲ့” လို့ စိုးရိမ်တကြီးပြောတော့
ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းထက် အပြုံးတစ်စက် တွဲရရွဲခိုလို့ပေါ့ ….
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်မင်းကို ပြောရင်း၊ ဆိုရင်း နင့်နင့်သည်းသည်း လွမ်းတယ် …..
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:05 AM0comments Links to this post
လိုလိုလားလားပါပဲ အပိုဆာဒါးတွေ ဘာမှ မပါဘူး။
ကျေကျေနပ်နပ်ပါပဲ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေလဲ တစ်ခုမှ မပါဘူး။
ခခယယနဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာလဲ တစွန်းတစတောင်မပါဘူး။
ငါ့ စိတ်ထဲ သိပ်ရှင်းတယ် …..
လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါ ရှင်းစရာရှိတာတွေ ရှင်းပစ်လိုက်မယ်။
သံယောဇဉ်ဆိုတာကို ရေလောင်းပေါင်းသင် သိပ်မလုပ်သင့်ဘူး မဟုတ်လား။
သိပ်ရှင်သန်သွားရင် ချုံနွယ်တွေလို ရှုပ်ထွေးတတ်တယ် လို့ ငါကပြောတော့
မင်းက “၀တ်ကျေတန်းကျေပါကွာ” လို့များ တံဆိပ်ကပ်ချင်သေးလား?
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:03 AM0comments Links to this post
“ ဒွိဟ ”
အမှောင်မှာ ကျင့်သားရနေတော့ မျက်စိကျိန်းတယ် …
နေ့ဆိုနေ့၊ ညဆိုည ပြတ်သားတာပဲကောင်းတယ်
ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမှ မကောင်းဘူး
အဲ့လိုပဲ ဟိုရောက် ဒီရောက်တိုင်းလဲ မကောင်းဘူး …
ဒါမှမဟုတ်ရင် တိတိပပသာ ဆန့်ကျင်ပစ်လိုက်
လူတွေ ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ် (သို့) ၀ိုင်းမြှောက်ပေးကြလိမ့်မယ်
သံယောဇဉ်ဆိုတာ ဆံပင်ရှည်တွေလို ညှပ်ပစ်လို့ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး
ကျိုးတိုးကျဲတဲ ဖြစ်ရင်တော့ အရုပ်ဆိုးမှာအသေအချာပဲ
တခါတလေလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တရားချမိတယ်
ဘာမှမရပဲ အပိုင်သိမ်းလိုက်နိုင်တာတွေကို မြင်အောင်ကြည့်ဖို့။
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:21 AM 1 comments Links to this post
" စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ချုပ်ချက်က ကြမ်းတယ် ….. "
“ ကိုကြီး ညီမလေးကို ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ် ဆိုတာ ညီမလေးအသိဆုံးပါ” တဲ့
စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ချုပ်ချက်က ကြမ်းတယ် …..
ပေးခဲ့သမျှ အချစ်တွေကို ချွေချွေသုံးနေတာလဲသိသတဲ့လေ …..
တ်ိမ်တွေ အဆုပ်လိုက်အခဲလိုက်ပွင့်နေတာမြင်ရင်လဲ လွမ်းပစ်လိုက်တာပဲ။
သူနဲ့သွားခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေ ရောက်တိုင်းလဲ လွမ်းပစ်လိုက်တာပဲ။
သူ့ကို မနက်တိုင်းဖုန်းဆက်နှိုးဖူးခဲ့တာလေးကို တွေးပြီးတော့လဲ လွမ်းပစ်လိုက်တာပဲ။
ဖုန်းပြောတိုင်း သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ ပြောဖို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့သလို
"ညီမလေးကိုချစ်လား" လို့ မေးဖို့လဲ ဘယ်တော့မှ မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ဘူး။
အချစ်တွေ အိပ်ပျော်သွားမယ်ကြံတိုင်း ပုတ်ပုတ်နှိုးခဲ့တာ ကိုယ်ပါကွယ်။
အနီးဆုံးကနေ အဝေးဆုံးဆိုတာက ကဗျာရေးလို့ပဲကောင်းတာ
ခံစားလို့တော့ သိပ်မကောင်းဘူး ….. ဆိုတော့ …
"အရူးမလေး …. ကွဲသွားမယ်၊ဝေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေး ဘယ်တော့မှ မတွေးနဲ့" တဲ့ ….
စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ချုပ်ချက်က ကြမ်းတယ်
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:19 AM0comments Links to this post
" သမရိုးကျ "
လောကကြီးမှာ မထူးဆန်းတာတွေကချည်း ထူးဆန်းသွားတတ်ကြတာ
သိပ်တော့လဲ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး ….
မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာတွေကို စွန်တစ်ကောင်လိုသာ လွှတ်တင်ထားလိုက်စမ်းပါ
သိပ်စိတ်မပူနဲ့ သူက သူ့စားကျက်သူရှာလိမ့်မယ်
လိုအပ်လာရင်သာ ကြိုးလေးကို တော့တော့ပေး
မင်းမျော်လင့်ချက်တွေက မင်းကို အလှပဆုံးပျံသန်းပြလိမ့်မယ်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်တို့၊ နှစ်နှစ်ကာကာတို့၊ ထာဝရတို့ဆိုတဲ့စကားတွေ
လုပ်မနေနဲ့ သုံးမကောင်းဘူး ….
မမြဲခြင်းဆိုတာကပဲ အမြဲဆုံးအရာဆိုတာ လက်ခံမိတဲ့ခဏ
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချည်နှောင်ဖို့က
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:58 AM0comments Links to this post
" အမှတ်တရ စက်တင်ဘာ "
မင်းနဲ့ငါရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက ရိုးစင်းတယ် ….
စိတ်ကလေးတချက်လွှတ်လိုက်တာနဲ့တင် မြင်းရိုင်းတွေက ကဆုန်ပေါက်ပြေးတယ် ….
ငြိမ့်ညောင်းတဲ့လေလှိုင်းထဲ မင်းရော ငါရော တူတူမျောတယ် ……
မျိုသိပ်ခြင်းတွေက မတော်တဆနဲ့ပဲ သပ်ရပ်စွာပြေကျ
မင်းနဲ့ငါ ကြည်နူးဖူးတယ် …
တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲ တစ်ယောက်
မက်မက်စက်စက် မှေးစက်ဖူးကြတယ် ……
ငါတိုအချစ်တွေကို မိုက်ရူးရဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ပျော်ခဲ့ဖူးကြတယ် …..
အဲ့ဒီနေ့က ဒီနေ့လို တနင်္ဂနွေနေ့ပဲ
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လို အ၀ါရောင်တွေသန်းပြီး ၀မ်းနည်းမနေဘူး။
အပြာရောင်တောက်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့လေးကိုပဲ မက်စက်ခဲ့တာပါ …..
၂၃၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၄
နံနက် ၁၂း၅၀
— feeling သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက်ခံစားရေးဖွဲ့သည်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 5:37 AM0comments Links to this post
" တိမ် "
*** ကဗျာများနေ့တဲ့ .... အပိုင်းအစလေး တစ်စ ချပါရစေ။ ***
ရေးချိန် - မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့
Posted by ကြယ်ပြာ at 5:34 AM0comments Links to this post
“အလင်္ကာမလေးရေ … ”
အင်္ကျီနီဝတ် အလင်္ကာမလေးရေ
ဒီရင်တစ်ခုလုံး ပန်းဖူးတွေ အလိုလိုပွင့်စေမယ်ကွဲ့။
အလွန်အကျူးဆိုတဲ့ အရာကြီးကို ခပ်ဝေးဝေးမှာပစ်ထားရဲ့နဲ့
မင့်ကို လွမ်းတဲ့အလွမ်းတွေက တောင်ပုံယာပုံ
မင်းရဲ့ နုညက်တဲ့နှုတ်ခမ်း စိတ်ကူးနဲ့ ခပ်ဖွဖွနမ်းရင်း
ငါ့ကောင်းကင်မှာ ညဆိုတာ ကင်း၊ အမြဲ လင်းနေခဲ့တာ ကြာပေါ့ကွယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 5:30 AM0comments Links to this post
" လွမ်းဆွတ်ခြင်း(၂) "
ဒါပေမယ့် တွယ်ရာမဲ့ ၀ိဥာဉ်တစ်ကောင်အတွက်တော့
အလိုရှိတိုင်း အလိုရိုရာကို ဖျက်ကနဲ ရွေ့သွားနိုင်တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား??
အဲ့လိုနဲ့ ငါ့ဝိဥာဉ်က အချိန်တိုင်း မင်းရှိရာအရပ်မှာ တ၀ဲလည်လည် …
၂၀၊မတ်၊၂၀၁၄ (ညနေ ၅း၃၁ )
Posted by ကြယ်ပြာ at 4:59 AM0comments Links to this post
" လွမ်းဆွတ်ခြင်း(၁) "
အလွမ်းအဆွေးဆိုတာက မဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာတတ်တဲ့ ဧည့်သည်။
အဲ့ဒီအတွက် အချစ်ဆိုတာ ထွက်သွားစရာမှမလိုတာ။
ရေးချိန် - မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့
" သစ်ခြောက်ပင် "
သစ်ခြောက်ပင်ကိုရော သစ်တစ်ပင်အဖြစ် မသတ်မှတ်ကြဘူးတဲ့လား?????
Posted by ကြယ်ပြာ at 4:54 AM0comments Links to this post
" နေလောင်သစ်သီး "
ဦးဏှောက်ကို တတိတိနဲ့ လှီးပစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဗလာချည်းကျန်တဲ့ ခေါင်းခွံထဲ
ရင်ဘတ်ထဲက မက်ဆေ့ခ်ျတွေနဲ့ချည်း ပြည့်သွားတော့တယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ ငါတို့ အချစ်က
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:26 AM 1 comments Links to this post
" ကျမရဲ့ အိမ်အပြန် "
တစ်လှမ်းချင်း ချက်ကျ လက်ကျ လျောက်နေတဲ့အခိုက်
ဓါတ်တိုင်လေးတွေ ကလဲ ငိုက်မြည်းလို့ပေါ့ ...
၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုတာဆိုလို့ ၀ါ၊စိမ်း၊ နီပြောင်းနေတဲ့ မီးပွိုင့်လေးပဲရှိတယ်။
တချက် တချက် လက်သွားတဲ့ ကားမီးရောင်တွေအောက်မှာ
အနည်းငယ်ထူတဲ့ မျက်ခုံးနှစ်ခု စုကပ်ပြီး မှုန်ကုပ်ကုပ်မျက်နှာပေးကို တွေ့ရင်
အဲ့ဒါ အထီးကျန် အိမ်ပြန်နေတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဆိုတာ
တချက်လောက် သတိရပေးလိုက်ပါ .....
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:20 AM0comments Links to this post
“ ချစ်တယ် ”
တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို မေတ္တာသက်ဝင်တဲ့အခါ
“ချစ်တယ်” ဆိုတာကို တဖွဖွရွတ်နေဖို့လိုသလား?
ချည်မျိုးစုံနဲ့ ရက်လုပ်ထားတဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အထည်လေးတစ်စလို့ ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ကိုယ့်အတွက်တော့ “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို တမြတ်တနိုးရွတ်ဆိုမိနေတော့တာပဲ။
အလှဆင်ဖို့ဆိုရင် ပိုမှန်မလားပဲ …..
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်သက် ထွက်သက်တိုင်းမှာ
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:18 AM0comments Links to this post
" စိတ်စေရာ "
ဒါပေမယ် အချစ်ဆုံးလို့ တော့ ကိုယ်မသုံးဘူး။
ခေါင်းစဉ်မဲ့ အရာပေါင်းများစွာ ဖွဲ့စည်းမှုကို
မင်းဆိုရင်ကော ဘယ်လို နာမည်တပ်မလဲ?
ငါတို့ အတွက် တမိုးနှောင်းပြန်ပြီ တဆောင်းသစ်ပြန်ပြီလို့ကြွေးကြော်ချင်ရင်တောင်
တကယ်က အချိန်မဲ့ဇုန်တစ်ခုထဲ လွင့်မျောပစ်လိုက်ချင်တာ။
တဖျစ်ဖျစ်မြည်နေတဲ့ နှလုံးခုန်သံတိုင်းရဲ့ အဖျားခတ်တုန်ခါမှုမှာ
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:57 PM0comments Links to this post
" အရင်းနှီးဆုံး "
စိတ်ချင်း နီးစပ်တယ်လို့ ဆိုမယ်။
နင့်အပျော် ငါ့ဆီကူး ငါ့အပျော်နင့်ဆီလူး
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:04 AM 1 comments Links to this post
" သဘာဝအတိုင်းပဲ "
ရတာမလို လိုတာမရတဲ့ လောကကြီးထဲ
တော်ကြာနေ နှင်းဆီတွေကို ဖူးစေလိုက်
တော်ကြာနေ စံပယ်တွေကို ဝေစေလိုက်
တော်ကြာနေ ခရေတွေကို ရနံ့ ကြွယ်စေလိုက်နဲ့
စိတ်ကူးနဲ့တော့ ခဏခဏ ရူးဖူးတယ်။
"လက်တွေ့ဆိုတာ သိပ်သဘာဝဆန်တာပဲ မေမေ" လို့ ခပ်တိုးတိုး ညည်းမိတဲ့ အခိုက်
နှင်းဆီတွေ မဖူးတော့သလို၊ စံပယ်တွေလဲ မဝေတော့ဘူး။
ဘ၀က ခါးတယ်လို့ ပြောရင်တောင် လောင်းစရာ သကာက မရှိခဲ့ဘူး။
ဘယ်အရာကိုမှ လက်သိပ်ထိုး အတင်းမခိုင်းဘူး။
အရာရာတိုင်းက နေတတ်ရင်တော့ ကျေနပ်စရာချည်းပဲ။
"အဲ့လိုတွေ သဘောပေါက်လာလေ စွပ်စွဲခံရခြင်းတွေ များလာလေပဲ မေမေရယ်"
ဟော ... စံပယ်တွေ တစ်ဖူးစ နှစ်ဖူးစ ဖူးပြကြတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:02 AM0comments Links to this post
" တခန်းရပ် "
ငါတို့တွေ ဒီလိုနဲ့ ဝေးသွားကြမလားပေါ့ .....
မပေါင်းဖူးပဲနဲ့ ကွဲသွားကြတဲ့ ဇာတ်လမ်း
တခန်းရပ်သွားမှာတော့ ပူမိတယ် ...
အရင်ကလို လွမ်း၊ အနမ်းတွေ လတ်ဆတ်ချင်သေးတယ်။
အတူဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပေမယ့်
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:01 AM0comments Links to this post
“ ရွာထိပ်ညောင်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ "
ဟော … ဟိုတစ်ဖွဲ့ လာပဟဲ့
မှတ်ချက်။ ။ ရန်ကုန်သူမို့ ရွာထိပ်သစ်ပင်ကို စိတ်ကူးနဲ့သာ ပုံဖော်ရေးထားပါတယ်။
" လွမ်းနေတယ် ………. တကယ် "
တိမ်စိုင်ထဲမျောလွင့် ပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်နေတဲ့ အခိုက်လေးကို ဖြစ်စေ …..
တိတ်ဆိတ်ခြင်းကြားက သက်ပြင်းချသံ သဲ့သဲ့ ကြားမိချိန်လေးကို ဖြစ်စေ ….
စကားသံတွေကူးလူး နှလုံးသားချင်းဝတ်မှုံထုံကူးနေချိန်လေးကို ဖြစ်စေ ….
ညင်သာတိုးသက် ကိုယ့်ရဲ့နာမ်စားလေးကို “သူ” ခပ်ဖွဖွလေး ခေါ်လိုက်ချိန်ကို ဖြစ်စေ ….
ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းထက် သူ့အနမ်းလေး ရုတ်တရက် ပွင့်သွားတဲ့အချိန်ကို ဖြစ်စေ ….
ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့ စိတ်ရဲ့မြန်နှုန်းတွေကို မမှီမကမ်း ဘာသာပြန်မိတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြစ်စေ ….
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားထက် နက်ရှိုင်းလွန်းတဲ့ ခံစားချက်တွေကို အံ့သြဘနန်းဖြစ်ရင်း ....
လွမ်းနေတယ် ………. တကယ်
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:56 AM0comments Links to this post
" အယောင် "
လာလာ လွမ်းမပြစမ်းပါနဲ့ ...
နားထောင်ရတာ ခါးတယ် ...
လေသံလေးကို ဖျော့ချ တိုးဖွဖွနဲ့
"လွမ်းတယ်" လို့တစ်ခွန်းတည်းပဲ ရေရွတ်လိုက်
လောကမှာ အချိုမြိန်ဆုံး ဆိုတာတွေ ထက်ပိုချိုမြိန်သွားလိမ့်မယ် ....
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:53 AM0comments Links to this post
လှိုက်တုန်သွားတာများ ငလျင်လှုပ်သလိုလို …..
တဖျတ်ဖျတ်ခါသွားတာများ စမ်းချောင်းထဲမှာငါးလေးတွေ ကူးနေသလိုလို …..
ထိရှလွယ်လိုက်တာများ စက္ကူယပ်တောင်လေး တစ်ချပ်လိုလို ….
စိတ်က လစ်လျူရှုတတ်ခြင်းတွေနဲ့ သူ့ခံစားချက်သူ အဆုံးသတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေလေရဲ့ ……
Posted by ကြယ်ပြာ at 4:29 AM 1 comments Links to this post
" ဗုံ မဟုတ်တဲ့ ဗုံ "
သားရေ အကောင်းစားကို မျက်နှာကျက်လုပ်လို့
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မာန်ဝင့် ဂုဏ်တင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
“အ” နေတဲ့ ဗုံတစ်လုံးရဲ့ နိဂုံး
Posted by ကြယ်ပြာ at 4:28 AM0comments Links to this post
" လွန်ပွဲ "
နွှဲခဲ့သည့်ပွဲ လွန်ပွဲ။ ။
(၁၃၊ဇန်န၀ါရီ၊၂၀၁၄ ၁၂း၂၄ မိနစ်)
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:44 AM 1 comments Links to this post
" ဒိုင်ယာရီ "
မသိမသာနဲ့ပဲ သိသိသာသာ လက်လွှတ်လိုက်ရတာတွေ
နှလုံးသားတစ်ခုစာလို့ ဖြေမိမလားပဲ ….
အမှတ်တယလေး တစ်ခုရလိုက် ဒိုင်ယာရီထဲ ပစ်ထည့်လိုက်နဲ့
မွစိတက်နေတဲ့ မမေ့နိုင်စရာတွေမှ ဒုနဲ့ဒေး …..
ကဲကွယ် … ဘာများလိုသေးသလဲ
လွမ်းရင် ဒိုင်ယာရီလေး တစ်ချက်ဖွင့်ဖတ်ရုံပေါ့ ….
ဒီထက်ပိုလွမ်းလာရင် လိုချင်တဲ့ စာမျက်နှာကိုရွှေ့
မျက်စိမှိတ်ခံစားလိုက်ယုံနဲ့ ကြည်နူးစရာတွေ အသေးစိပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:23 AM0comments Links to this post
" တစ်နေ့နေ့ .... "
မျက်တောင်မွှေးတဆုံးစာ ကြည်နူးမှုတွေနဲ့ မျက်စိတဆုံးစာ ကြေကွဲရတော့မယ်
အချိန်ရထားကတော့ သူဘာမှ မသိသလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပုံမှန်သွားဆဲ သွားမြဲ …..
ရင်နင့်အလွမ်းတွေကိုတော့ ငါကိုယ်တိုင် ငါ့ကောင်းကင်မှာ စီရရီချိတ်ဆွဲလို့ပေါ့ …
ဒီလိုနဲ့ အလွမ်းတွေ လေးလေးလာလိုက်တာဟာ ငါ့ကောင်းကင်ညွတ်ကျလာတဲ့အထိ ….
တနေ့နေ့တော့ …. အင်း .. တနေ့နေ့တော့
ငါ့ကောင်းကင်ပဲပြိုကျလာမလား … ဒါမှမဟုတ် အလွမ်းတွေပဲ ကျကွဲကုန်မလား ??
ဘယ်ရလဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ကွဲနာကျမှာကတော့ အသေအချာပဲ …..
တနေ့နေ့ပေါ့ ….. အဲ့ဒီ တနေ့နေ့ကို
ရောက်လာနိုး မမျှော်ကိုးပေမယ့် ရောက်လာဦးမယ် …… ရောက်လာဖြစ်လိမ့်ဦးမယ် …..
အဲ့ဒီ တနေ့နေ့ဆိုတာများ ရောက်လာခဲ့ရင် ….
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကောင်းကင်လေး နေကောင်းပေးပါကွယ် …. နော် ......
" စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ချုပ်ချက်က ကြမ်းတယ် ….. "...